Waa maxay Corel Draw: maxay tahay iyo shuruudaha | Hal-abuurka khadka tooska ah
Ilaa hadda waxaan ognahay barnaamijyo badan oo fududeeya shaqada naqshadeynta ama qaabeynta. In yar oo naga mid ah ayaa og barnaamijyada tirada badan ee hadda la qorsheeyay ee loo abuuray si ay noogu fududeeyaan shaqadan. Laakiin had iyo jeer waa muhiim in la tixgeliyo qaar ka mid ah maadaama ay aad muhiim u yihiin haddii naqshadeynta garaafyada ay aad ugu badan tahay nolosheena.
Qoraalkan waxaan kuugu nimid inaan kaala hadalno Corel Draw, haddii aadan aqoon, waxay noqon doontaa qalabkaaga cusub ama software sida aad doorbidayso inaad wacdo. Nala joog oo nagu soo biir hagahan cusub ee aanu kuu qaabaynnay in ka badan iyo in ka yar toona.
1 Waa maxay Corel Draw
1.1 sida ay ku timid
1.2 hawlaha ugu muhiimsan
3 Shuruudaha rakibidda
CorelDraw, waa codsiga ugu weyn ee suite of barnaamijyada CorelDRAW Graphics Suite oo ay bixiso Corel Corporation oo loogu talagalay in lagu daboolo baahiyo badan, sida sawir-qaadista, qaabaynta bogga daabacaadda iyo shabakadda internetka, dhammaan waxaa lagu daray hal barnaamij. Waa barnaamij ilaalinaya astaamo la mid ah Adobe InDesign Photoshop ama Illustrator.
Kani waa software aad u wanaagsan oo loogu talagalay kuwa jecel naqshadaynta garaafyada. Barnaamijkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad u sameyso naqshado qaab xirfadaysan, adigoo haysta qalab aad u sahlan isticmaalka isticmaalaha. Mid ka mid ah faa'iidooyinka CorelDraw waa isticmaaluhu waxaad kala dooran kartaa noocyo kala duwan, Sida kor ku xusan waxaa jira noocyo loogu talagalay xirfadlayaasha iyo noocyada kale ee aan xirfadda ahayn. Mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa la qabsanaya heerka aad haysato, taas oo ka dhigaysa mid soo jiidasho leh oo sahlan in lagu dhex maro.
Nuqulkii ugu dambeeyay ee software-kani waa Corel Draw x9, waa bedelka Corel Draw x8, oo la yimid qalab cusub, interface aad u fiican, oo aad u fudud in loo turjumo isticmaalaha, kaas oo aad awood u yeelan doonto inaad ku sameyso naqshado. hab xirfadaysan.sida ku cad hal-abuurnimadaada.
sida ay ku timid
Xigasho: Qoob-ka-ciyaarka Wacan
CorelDRAW waxay ku qaadatay adduunka garaafyada kumbuyuutarka duufaan 1989-kii, iyada oo soo bandhigtay sawir-gacmeed midab buuxa ah iyo barnaamij naqshadayn, oo ah kii ugu horreeyay ee noociisa ah. Laba sano ka dib, Corel ayaa mar kale kacday warshadaha, isaga oo soo bandhigay sawir-gacmeedkii ugu horreeyay oo dhan-in-hal ah oo leh nooca 3, kaas oo isku-dhafan sawirka vector, qaabaynta bogga, tafatirka sawirka iyo wax ka badan oo hal xirmo ah.
Labaatan sano ka dib, CorelDRAW Graphics Suite X4 waxa ay sii waddaa hal-abuurnimada, iyada oo soo bandhigtay qaabaynta qoraalka cusub ee tooska ah, lakabyo gaar ah boggiiba, iyo la-qabsiga adeegyada si loo suurtogeliyo wada-shaqeynta wakhtiga-dhabta ah. Noocaan waxaa loo habeeyay nidaamka qalliinka Windows ee ugu dambeeyay, isaga oo sii wada dhaqankiisa sida qolka garaafyada xirfadleyda ee PC-yada.
hawlaha ugu muhiimsan
Corel Draw waa qalab ka shaqeeya gaar ahaan vectors. Vectors aad bay faa'iido u leeyihiin haddii waxa aad rabto ay tahay samee calaamado, astaamo, buug-yaraha, kaararka ganacsiga iwm.
Waxaa ka mid ah hawlaha uu Corel Draw leeyahay, waxay u taagan tahay in ay leedahay aragtiyo aad u wanagsan, kontaroolada iyo qanjidhada, sidoo kale waxay leedahay qalab LiveSketch ah iyo sliders interactive, taas oo ah, barnaamijku wuxuu leeyahay xoogaa is-dhexgal ah.
Waxa kale oo ay leedahay aalado ay ka mid yihiin gaussian blur, qalab nuqul ah, bogsiinta clone, kormeerayaal badan, maamulaha font, soo dejinta goobta shaqada, kor u qaadida qalinka awooda leh iwm.
Xulashada: Waxay kuu ogolaanaysaa inaad la shaqeyso naqshadeynta, taas oo ah, wareegso oo leexi adigoon beddelin cabbirkiisa.
Isbadal lacag la’aan ah.
Xulashada Xorta ah: Xulashada shayga xorta ah.
Qalabka tafatirka qaabka: Sida Hufnaanta Fiican si loo wanaajiyo qaabka walxaha iyadoo la dhimayo qanjidhada oo la tirtiro cidhifyada, qaabka kaas oo gacan ka geysanaya hagaajinta qaabka shayga iyo muquuninta oo gacan ka geysanaysa sameynta saamaynta gaarka ah ee naqshadda shayga.
blur: Habbee curiye adiga oo la falgalaya kordhinta ka samaysan tan ama Samee gogol-xaadhaadyo hareeraheeda oo dhan.
Waa barnaamij vector, oo fududeynaya sameynta naqshadaha sida daabacaadda, xardho, iyo maadaama uu ku saleysan yahay vector, waad kordhin kartaa nashqaddaada oo ma lumin kartid tayadiisa.
Waxaa jira noocyo ku qoran Isbaanish, halka shirkado kale oo sameeya software aysan fiiro gaar ah siinin suuqa Isbaanishka ama Laatiinka.
software in taageero habka bogag badan, taas oo ah, waxay ilaalisaa dheelitirka labada dhinac ee bogga.
Marka laga reebo in lagu rakibo PC, waxaa lagu rakibi karaa MAC, sida nidaamyada hawlgalka sida Windows iyo Linux.
Waxay ka shaqayn kartaa faylka Xafiiska (Microsoft).
Faa'iidada la shaqaynta naqshado kale oo lagu soo saaray baakado kale sida tusaale “sawir -qaade”.
Waxay taageertaa wareejinta sawirka oo leh fidinta TIF, oo aan lagu samayn barnaamijyada kale.
Waxay leedahay qalab tafatir deg -deg ah, taas oo ah, iyada oo aan gujin badan la samayn.
Waxaad fursad u leedahay inaad taageero ka hesho shabakadda haddii ay dhibaato jirto xilliga horumarka.
Waxaad u habeyn kartaa sawirada sida waxaa la socda Rinji-Sawir, software tafatirka ku salaysan sawirka bitwise.
Waxay qaadataa meel badan oo disk adag.
Software qiimahoodu aad u sarreeyo.
waxay cuntaa xasuus badan marka sawir la samaynayo.
Waa inaad haysataa kombiyuutar qaabayntiisu horumarsan tahay si loo farsameeyo garaafyada
Waxaa lagu talinayaa in la rakibo kaarka fiidiyowga ee u hoggaansan OpenCL 1.2
Aad rakibtay AMD Ryzen 3/5/9/threadripper EPYC processor
4 GB RAM xusuusta
Hayso meel bannaan oo 4 GB ah oo ku jirta wadista adag
Shaashadda oo leh xallinta 1280 x 720 at 100% (96 dpi)
Shaashadu waa inay noqotaa mid taabasho badan leh, ama leh astaamo aad isugu eg
Haddii nooca CorelDraw uu yahay nooca sanduuq, waa inuu ahaadaa wuxuu leeyahay DVD Drive, isagoo ah 900 MB ka soo dejisan DVD.
Waxaa lagama maarmaan ah in la helo xiriir internet si loo rakibo loona xaqiijiyo.
Waa inuu lahaadaa processor-ka Intel-ka-badan (4 diir oo macquul ah ama ka badan) oo taageera 64-bit
4 GB RAM RAM, waxaa lagu talinayaa in xusuusta ay ka weynaato 4
Shaashadu waa inay lahaataa 1280 x 800 qaraarka Xaaladaha qaarkood xallinta 1920 x 1080 ayaa lagula talinayaa
Hayso kaarka fiidiyaha ee la xiriira oo lagu rakibay OpenCl 1.2
Hayso 4GB boos disk adag oo lacag la'aan ah.
Kiniinada garaafyada ama jiirka.
Si aad u fuliso rakibidda waa inaad leedahay xiriir internet.
Sannadkii 1989 -kii waxay sii daayeen nooca 1.0 inta badan waxaa loogu talagalay Microsoft Windows 286, isagoo ah nooc hore marka loo eego heerarka hadda jira. Kacaanka adduunka naqshadeynta garaafka.
1990 nooca 1.11 ayaa soo baxay: Noocan garaafyada laba iyo saddex cabbir ayaa la soo bandhigay.
1991 CorelDraw 2 waxaa la sii daayay iyada oo la socota shaqada daabacaadda, oo awooddeedu ay ahayd in la isku daro labadaba qoraalka iyo walxaha garaafka oo awood u leh inay daabacaan, waxay la soo baxday qalab sii xumaan kara oo isku dhafan walxaha qaabkeeda.
CorelDRAW 12: Nooca la sii daayay 2004tii, noocaan qaab dhismeedkiisa gudaha ayaa la hagaajiyay oo la fududeeyay, tani waxay ka dhigtay mid xirfad leh, adag oo dheellitiran.
CorelDRAW X3: Noocan curiye cusub oo vector ah ayaa lagu daray "Corel PowerTRACE", shaqadeeda si ay wax uga bedesho khariidado gaar ah sawirada vector, nooca la sii daayay 2007.
Corel X4: Nooca aad ku dartay qaab-dhismeedka qoraalka ee ahaa in hore loo arko, sifooyinka ama sifooyinka qoraallada ka hor inta aan lagu dabaqin qoraalka, version ee sanadka 2008 ayaa suuqa.
DRAW X5: Inta badan noocaan waxaa loo habeeyay Windows 7 nidaamka qalliinka, horumarinta naqshadaha ayaa la hagaajiyay, hagaajinta socodka shaqada, iyo sidoo kale waxaa la hagaajiyay si loogu shaqeeyo processor-yada badan ee asaasiga ah. Sannadkii 2010 noocaan ayaa la sii daayay.
CorelDRAW X6: Noocan waxaa lagu daraa matoor qoraal ah oo xoog badan. sidoo kale canaasiir leh hawlo waaweyn (spiraal, modify, limit, soo jiidasho), nooca suuqa la galiyay 2012.
CorelDRAW X7: Hawlaha waa la hagaajiyay, qalab cusub iyo qaab dhismeed cusub ayaa la sameeyay.
Sawir 2017: Noocan, qalab cusub oo loo yaqaan LiveSketch ayaa la hirgeliyay, kaas oo adeegsada waxtarka shabakada neerfaha. Suuqa soo gal 2017.
CorelDRAW 2018: Cunsurka hadhka xannibaadda ayaa lagu daraa kaas oo kuu oggolaanaya inaad ku darto hadhka walxaha. Nooca suuqa galaya Abriil 2018
CorelDRAW 2019: Noocan, foomamka xisaabta ayaa lagu daray. Waxa ay suuqa soo galaysaa bisha March 2019.
Haddii waxa aad raadinayso uu yahay barnaamij wanaagsan oo lagu naqshadeeyo oo ikhtiyaarrada Adobe aysan ku qancin, Corel Draw shaki la'aan waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican ee aad ku dari karto liiskaaga. Waxa kale oo ay leedahay noocyo kala duwan, kuwaas oo mid kastaa siiya hagaajinta barnaamijka taas oo ka dhigaysa mid xitaa sahlan. Waa barnaamijka ugu fiican tan iyo markii ay sidoo kale ku haboon nidaamyada sida Windows iyo Mac, tani waxay u ogolaanaysaa in ay jiraan wax dhibaato ah oo ku saabsan nidaamka.
Haddii, dhanka kale, aadan helin aragti wanaagsan barnaamijkan, waxaad ku xisaabtami kartaa barnaamijyada sare sida Canva, Photoshop. Inskape, Naqshadeeye Xidhiidhka ama Noocyada Dawaarka. Hadda waxaa la gaaray waqtigii aad isku dayi lahayd inaad soo dejiso oo aad ku rakibto PC-gaaga, oo aad naftaada ku lumiso mid kasta oo ka mid ah aaladaha iyo fursadaha u furan, iyo haddii aad shaki badan ka qabto. si fudud ayaanu kuugu xalinaynaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Waa maxay Corel Draw